Shiinaha aluminium dahaarka COIL warshad iyo alaab | Alucosun
Aluminium dahaarka dahaarka
Aluminium horay loo rinjiyeeyay wuxuu bixiyaa dusha sare oo tayo sare leh oo rinji ah oo isugu jira midabbo iyo qaabab ballaadhan. Xitaa waxaa lagu heli karaa filimaan daabacan si loo bixiyo saameyn sida qoryaha-hadhuudhka iyo marmarka.
SHARAXAADA SOO SAARKA
Midabku wuxuu noqon karaa mid aad u jilicsan ama aad u dhalaalaya, jilicsan, oo ka soo horjeeda xoqida. Waxaa sidoo kale laga heli karaa fasalada kala duwan ee aluminium iyo alloys si aad isugu dheellitirto qaab dhismeedka iyo xoogga. Alucosun waxay bixisaa gariiradda daboolan oo tayo sare leh ee ku jira PE, HDPE, PVDF, nooca NANO-PVDF ee dalabkaaga badan.
Alucosun aluminium isku dhafan wuxuu qaataa PVDF KYNAR 500 ama rinjiyeynta FEVE oo loo yaqaan adkeysigooda wanaagsan. Waxyaabaha kiimikada ugu fiican iyo jir ahaaneed ee rinjiyeyaashan tayada leh ayaa si wanaagsan loo aqoonsaday loona caddeeyay dadka isticmaala adduunka iyo naqshadayaasha tobankii sano ee la soo dhaafay haddana tanina wali way sii socotaa maalin kasta.
Alucosun waxay leedahay kala duwanaansho midab aan xadidneyn iyo xulashooyin dhameystir badan, la kulanka naqshadeeyayaasha iyo naqshadayaasha hal abuurkooda aan xad laheyn
Alucosun NANO-PVDF guddiga isku dhafan ee aluminium waxaa lagu daboolay lakabka rinjiga Nano-PVDF, isagoo ku daraya lakab daahan hufan oo NANO ah oo ka sarreeya maqaarka PVDF ee maqaarka hore ee aluminium. Marka laga reebo dhammaan faa'iidooyinka cajiibka ah ee dahaadhka PVDF, NANO-PVDF way ka sarreeyaan wasakhda-caabbinta, kiimikada-caddeynta iyo is-nadiifinta.
Sida microscope-ku muujiyo, dusha PVDF wuu kacsan yahay halka midka NANO-PVDF uu siman yahay. Tan awgeed, carradu iyo saliidu si dhib yar ayey ku dhex qulqulayaan dusha sare dhibicda roobkuna si fudud ayey u qaadan kartaa, taasoo hoos u dhigeysa qiimaha dayactirka.
Dhir & Marble
Qoryaha Alucosun iyo taxanaha marmarka waxay isku daraan quruxda dabiiciga ah ee qoryaha iyo dhagaxda iyo astaamaha ugu fiican ee Alucosun aluminium aluminium, iyagoo keena muuqaallo cusub oo dhismayaasha ah. Faa'iido kale oo muhiim ah oo ka badan alwaaxda iyo dhagaxa dhabta ah ayaa ah in maaddada loo qaabeyn karo naqshad kasta oo la codsado.
Laba nooc ayaa la heli karaa iyadoo la adeegsanayo tayada dhameystirka rinjiga Kynar.
BURASHO & MIRROR
Alucosun ayaa burisay oo muraayad taxane ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku qanacdo rafcaanka bilicsanaanta leh tayada ilaaliyaha nadiifka ah ee tayada leh, isla markaa, waxay ku siineysaa waxqabadka sare ee alucosun aluminium aluminium ah sida adkeyn aan caadi ahayn iyo iska caabin cimilada. Si faahfaahsan, taxanaha buraashka ayaa kaa dhigaya inaad aragto aluminium ceyriin ah oo ugu fiican uguna fiican muraayaddu waxay ku siinaysaa muuqaal la mid ah muraayadda muraayadda oo u nugul cadaadiska.
Waad ku mahadsan tahay saameynta gaarka ah, labadan dhammaadku waa kuwo caan ku ah qurxinta caadiga ah ee gudaha iyo bandhigyada. Ka sokow, Alucosun sidoo kale wuxuu raadiyaa anodized labadan dhammaad oo uu ku siinayo naqshadayaasha fikradaha hal-abuurka ah ee dhismaha dibedda oo leh dammaanad-dheer.
Waxqabadka dusha sare
Adag, biraha, alwaax, Muraayad, Anodized, caday
PE, HDPE, PVDF, FEVE, NANO-PVDF, LAGU SOO SAARAY
Saqafka, Saqafka, Albaabka, Samaynta ACP, Gutter, Saqafka jiingado
Xidhmada caadiga ah
15-25 maalmood gudahood ayaa ku tiirsan cabirka saxda ah ee gariiradda
L / C Irrevacable L / C aragga, ama T / T
Hore: XARUNTA ISKU SHIRKA
Xiga: ALUMINUM PANEL KA DUWAN
Aluminium gariiradda dahaarka leh
Dahaarka Aluminium dahaarka
Dahaarka Color Aluminium gariiradda
Midabka dahaarka Aluminium gariiradda
Pvdf dahaarka Aluminium gariiradda
Xadiiqada Warshadaha ee Hushi, magaalada Huashi, magaalada Jiangyin, Gobolka Jiangsu, Shiinaha, 214421.
Qalabka isku dhafan (Jiangsu) wuxuu ahaa xul ...
Laga bilaabo Sebtember 1, Shiinaha waxay si wadajir ah u qaadan doontaa ...
Polyurethane cusub oo lidka ku ah bakteeriyada ayaa caawisa bogsashada ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Wisdom Metal Composites Ltd, All rights reserved.